Xubin ka mid ah xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid oo u geeriyooday caabuqa Coronavirus – Gool FM
(Madrid) 20 Mar 2020. Caabuqa dunida ku faafaya ee Coronavirus ayaa saameeyay ciyaartoy badan oo kubadda cagta ku xamaasha iyo qoysaskooda.
Difaaca Real Madrid ee Nacho Fernandez walaalkiis, Alex, ayaa u sheegay “Diario de Cadiz” in ruux ka mid ah qoyskooda uu dunida kaga tagay xanuunka COVID-19.
Alex ayaa saxaafadda u sheegay inay ku jiraan xaalad dhib badan, hase ahaatee weli qoyskiisa ay ku dadaalayaan sidii xaaladdooda caafimaad uga taxaddari lahaayeen.
“Madrid gudaheeda waxaa jira dad qoyska ka mid ah kuwaasoo laga helay cudurka, qof ka mid ah dadka waaweyn ee qoyska ayaa geeriyooday. Waxaan dhihi karaa annagana wey ina saameysay” ayuu walaalka la dhashay Nacho sheegay.
Alex oo khadka dhexe kaga ciyaara kooxda Cadiz, horayna uga tirsanaa Real Madrid iyo Espanyol ayaa sidoo kale tibaaxay in xaaladda cudurkan ay tahay mid aadan filaneyn dhaqaaqiisa, diyaar garow ku filanna uusan jirin.
“Maalin walba ayaan qoyska la xiriiraa, waxaana mar walba ka fogeeyaa xanuunka dilay qofka naga weyn ee qaraabadeenna ah. Dhammaanteen waan caafimaad qabnaa, waxaanna sii joogi doonnaa guriga laba toddobaad oo hor leh” ayuu hadalkiisa kusoo xiray Alex Fernandez oo la dhashay Nacho Fernandez.
Si kastaba ha noqotee, si rasmi ah ma uusan u sheegin Alex qofka geeriyooda magaciisa iyo waxa uu u ahaa, balse waxa uu xaqiijiyay in ruux ka mid ah qoyska uu geeriyooday.
Tebas oo kooxaha La Liga ku wargeliyay inay tababarka u billaabaan sida ugu dhaqsiyaha badan